Safal Tips Archives - Page3of 28 - Safal Stories
Home Safal's Columns Safal Tips पृष्ठ 3
दिमागमा धेरै कुराहरु खेलेर तनावमा हुनुहुन्छ ? दिमागी सन्तुलनको लागि यसो गर्नुहोस्
तपाईं जीवनमा केही हासिल गर्न चाहनुहुन्छ । तर, त्यो कुरासम्म पुग्नको लागि बाटो सहज पक्कै हुन्न । जीवनका अनेक परिस्थिति पार गर्दै...
हामीलाई थाहा छ, सफलता भनेको निरन्तरको यात्रा हो । कहिलेकाहीं हामीलाई आफू यो बिन्दुबाट अगाडी बढ्न सकिन , एकै ठाउँमा रहें भन्ने...
तपाईंले पढ्नकै लागि मात्र पढिरहनुभएको हो ? काम गर्नकै लागि मात्र काम गर्नुभएको हो ? आफूले पढिरहेको या काम गरिरहेको कुरासंग आफ्नो...
हरेक व्यक्तिलाई आफू स्मार्ट बन्न मन पर्छ । स्मार्ट देखिनकै लागि त्यसै अनुरुपको पोशाकमा, सरसफाईमा ध्यान दिइन्छ । तर स्मार्ट हुनु भनेको...
1234...2828 पृष्ठ 3